बच्चाहरु लामो गर्मी सम्झना छ, यो सानो प्रयास लागू गर्न निश्चित हुन। के तपाईं स्कूल समय बनाउन समय आवश्यक?
एक दिन यात्रा व्यवस्था
तपाईं पहिले नै परिवार छुट्टी खर्च गर्न व्यवस्थित छ भने पनि, तपाईं अझै गर्मी को अन्त गर्न रोमाञ्चक दिन यात्रा व्यवस्था गर्न सडक र थप समय हिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम गर्ने दिनहरु मा एउटा यात्रा योजना ठूलो भीड र ट्राफिक जाम नगर्न साप्ताहअन्त द्वारा पन्छाउन छैन राम्रो छ।
तपाईं कहाँ जाने यो कुरा छैन। बस कार मा एक बच्चा रोपेर र, उदाहरणका लागि, जाने नजिकैको सहरमा। छोराछोरी स्थानीय आकर्षण देखाउन, प्रकृति आनन्द, र तपाईँले नयाँ खेल मैदान सँगै छोराछोरीको संग्रहालय भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ वा।
फ्लैश रोशनी खेल्न
मात्र न्यानो गर्मी साँझ तपाईं यस्तो असामान्य लालटेन खेल्न सक्षम हुनेछ किनभने त्यहाँ एक वर्षको समय भन्दा वर्ष को कुनै राम्रो समय छ। गर्मी रात - सिद्ध पृष्ठभूमि, जो बच्चाहरु प्रकाश र रंग को प्ले रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ।
एक स्वयंसेवक बन्न
केही एक संयुक्त स्वयं रूपमा, परिवार बाँध्छ। एक परियोजना, को दान काम र बच्चाहरु र आमाबाबुको लागि धेरै यस्ता गतिविधिहरु को वरपर आफ्नो बच्चाहरु समावेश। जो संग खिलौने को दान को पनि कार्य छोराछोरीलाई अब प्ले हुनेछ अन्य परिवार गर्न धेरै अर्थ राख्छ।
यसलाई सकारात्मक उदाहरण छिमेकी सबै अन्य बच्चाहरु को लागि छ किनभने तपाईंको छोराछोरी, अरूलाई मदत गर्न प्रोत्साहन र सिकाउनुहोस्। छोराछोरीलाई दयालु र उदार अप बढ्नेछ, तिनीहरू बहुमूल्य पाठ पनि उठाउन बाहेक, अरूलाई दया देखाउन, समानुभूति सिक्न।
निःशुल्क मनोरञ्जन बारे मा भूल छैन
किनभने जहाँ तपाईं नि: शुल्क गर्मी मनोरञ्जन कि सही छोराछोरीलाई रुचि पाउनुहुनेछ छ, शहर को केन्द्र को सबै भन्दा यात्रा। छोराछोरी लागि बाहिर बलिङ गर्न यी तातो गर्मी दिनमा, तपाईं सडक हुन चाहेको बेला निःशुल्क संगीत बाट - तपाईं बस केहि बारेमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै शहर मा, त्यहाँ आफ्नो फुर्सदको समय भर्न रोचक कुरा गर्न बच्चाहरु को लागि धेरै मुक्त गर्मी कार्यक्रम छन्।
तपाईं को लागि खोज र नयाँ स्कूल वर्ष को सुरु सम्म यस्तो कार्यक्रम अप धाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई केही पनि सबै विद्यार्थीहरू आफ्नो समय लिन सहभागी मौका, शैक्षिक प्रक्रिया बाँकी एक चिल्लो संक्रमण छ, नयाँ शैक्षिक वर्ष केही हप्ता जानुहोस्।
, बगैंचामा काम गर्न छोराछोरीलाई सिकाउन आफ्नो बगैचा गर्न समय लाग्न
गर्मी गर्मी आफ्नो फूल ओछ्यानमा, र विशेष गरी आफ्नो रंग मा हानिकारक हुन सक्छ। को गर्मी दिन छोटो र कूलर रही रूपमा, तपाईं र तपाईंको छोराछोरीलाई समय बगैचा को बहाली मा देशमा, तिनीहरू शरद ऋतु खुशबू र सौन्दर्य तपाईं खुसी भनेर खर्च र रोपेर सक्छ नयाँ फूल।
सबैलाई आफैलाई एक माली रूपमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ त त्यहाँ सबै उमेरका बच्चाहरुका लागि बगैंचामा काम धेरै छ। यो गतिविधि बस आफ्नो परिवारको लागि उपयुक्त छ भने, चिन्ता छैन। त्यहाँ धेरै अन्य अद्भुत र उपयोगी आउटडोर कुराहरूलाई ठ्याक्कै रुचि छोराछोरीलाई गर्दै छन्।
पुरानो मित्र संग पूरा
आफ्नो छोराछोरीले स्कूल साथीहरूसँग भेट्न मद्दत गर्नुहोस्। अग्रिम बैठक लागि उपयुक्त मिति चयन खेल भनेर छोराछोरीलाई घरमा र सडक मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ सबै प्रकारका भन्दा लाग्छ। आफ्नो सबै शक्ति संलग्न तिनीहरूले पूरा र स्कूल वर्ष को सुरु गर्नु अघि सँगै केहि मजा गरिरहेको समय खर्च गर्न सक्षम थिए भनेर, कल्पनाले जडान गर्न सम्भव सबै गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
बाइक सवारी व्यवस्था
छोराछोरीलाई सबै गर्मी बाइक चढेर हुन सक्छ, तर पछिल्लो समय तपाईं तिनीहरूलाई साथ जाँदा? लगाउने सबै सुरक्षा उपकरण, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - हेलमेट लगाउन, र एक परिवार बाइक सवारी व्यवस्था भूल छैन।
छैन जो दुई-Wheeler सवारी एकदम तयार, अझै पनि भविष्य cyclists विशेष ट्रंक मा तपाईं संग चल्न सक्छ, त्यसैले तिनीहरू पनि, यी रोमांचक सम्झना छैन। तपाईं केवल साइकल सवारी सिकिरहेको गर्नेहरूलाई छन् भने, कृपया अतिरिक्त धैर्य हुन, आफ्नो गर्मी बिदा अन्त गर्नु अघि यो उपयोगी र रोचक उद्यम गर्न एक बच्चा सिकाउन प्रयास गर्नुहोस्।
एक पक्ष बुलबुले फेंक
के साबुन बुलबुले भरिएको छ जो फिर्ता यार्ड मा एक राम्रो समय, भन्दा बढी मजा हुन सक्छ? साबुन बुलबुले संग एक पक्ष फेंक, यो बस स्वादिष्ट छ, सबै यो शो सम्झना हुनेछ।
तपाईं यो धेरै बस गरिन्छ रूपमा आफैलाई द्वारा बुलबुले को एक मिश्रण तयार गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं बस यो तपाईं को लागि सबै काम गर्न को बुलबुले लागि सस्तो कार भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ।
को पिछवाडे मा शिविरमा
आफ्नो घरमा सबै ग्याजेटहरू छोडेर सडक मा जानुहोस्। उसोभए, तपाईं देश मा, बस यार्ड निकास हो कम से कम भने।
को पिछवाडे मा डेरा डाले - यो आफ्नो बच्चाहरु को लागि एक ठूलो गर्मी साहसिक छ। कुनै पनि समयमा तपाईं घरमा, उदाहरणका लागि, शौचालय जान फर्कन सक्नुहुन्छ किनभने यो धेरै सुविधाजनक छ।
स्कूल लागि खरिद
कुनै कुरा तपाईं कसरी आफ्ना छोराछोरीलाई लागि गर्मी छुट्टी विस्तार गर्न प्रयास, नयाँ स्कूल वर्ष छिटो, एक पनि तीव्र गतिमा आउँदै भन्न सक्छ। विचारशील र, नयाँ रचनात्मक विचार लागू तरिका नयाँ स्कूल वर्ष आफ्ना छोराछोरीलाई मदत, उज्ज्वल कुरा, असामान्य किन्न।
, को पूर्वप्राथमिक निष्पक्ष भ्रमण गर्न स्कूल लागि आवश्यक सबै प्राप्त निश्चित हुनुहोस्।
आवेदन आफ्नो हातमा मार्च 8। छोराछोरीको रचनात्मकता: टालो सजावट, शिल्प
Catarrhal छोराछोरीको गलसुआशोथ। Catarrhal एनजाइना: एन्टिबायोटिक को उपचार, समीक्षा
के नवजात शिशुहरु मिश्रण विशेषज्ञहरु लागि राम्रो सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ?
अक्टोबर जन्म केटी, कल गर्न कसरी। सरल र मौलिक नाम
बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय खोकी: यो के हो?
विश्व व्यापार के हो?
Toxocariasis के हो? उपचार र रोग को लक्षण
Cité डे Carcassonne: थप जानकारी, वर्णन, इतिहास र रोचक तथ्य
दिन अस्पताल - तनाव-मुक्त उपचार
हाइड: Mordekayzer (Mordekaiser) परभक्षी को लिग मा